I-Twitter: Landela ngokuzenzakalela ngokususelwa endaweni | Martech Zone
I-Twitter: Landela ngokuzenzakalela ngokususelwa kundawo
NgeSonto, uDisemba 29, i-2013 NgeSonto, uDisemba 29, i-2013 Douglas Karr
Ukuba kokubili umphakathi kanye nendawo yokuxhumana, amabhizinisi angasebenzisa ngokunenzuzo Twitter ukukhulisa ithrafikhi yabo yendawo yokuthengisa - kulula kunalokho abaningi bacabanga. Abasebenzisi be-Twitter bayasebenza futhi bayaphimisela ukuthi bakuphi nokuthi benzani. Ngokulandela abasebenzisi be-Twitter abakhuthele esifundeni, izinkampani ezithembele ebhizinisini lendawo zingakhuphula ithrafikhi yazo eqondile futhi zikhulise umkhiqizo wazo online.
Ama-Realtors, izitolo zasendaweni, imigoqo, amakilabhu, abasebenzela imishwalense… noma elinye ibhizinisi eliqhuba ibhizinisi ngokususelwa endaweni ethile lingazuza ngokulandela nokwakha ubudlelwano nabasebenzisi be-Twitter abaseduze kwebhizinisi labo. Inzuzo eyengeziwe ukuthi laba bantu bavame ukwabelana ngezithombe, amavidiyo nezibuyekezo - hhayi ku-Twitter kuphela, kodwa kuwo wonke amanye amanethiwekhi omphakathi kanye nezinhlelo zokusebenza.
Tweet Adder izothola abasebenzisi be-twitter ngendawo engamamayela ayi-10, amamayela angama-25, amamayela angama-50, noma amamayela ayi-100 kunanoma iyiphi ikhodi ye-zip, ukungenisa, okulandelayo kuthumela okuzenzakalelayo. Tweet Adder ukuthole lokho kuze kube Ama-56% azokulandela emuva - ukuhlinzeka ithuba lokuthi baqale ubudlelwane bakho bokuxhumana. Futhi, bangaqala ukuphendula futhi babhale kabusha izibuyekezo zakho!
Ukudalulwa: Lokho isixhumanisi sokusebenzisana!
Tags: okulandelayoibangageolocationirediyoisengezo se-tweetumabhebhanaTwitterngaphakathi kwebanga
Iqhaza Le-Digital Media Ekumaketheni
Ukukhangiswa kokuqukethwe okuyi-Long-Form